PolyBit စျေး - အွန်လိုင်း POLY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PolyBit (POLY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PolyBit (POLY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PolyBit ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $13 859 407.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PolyBit တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PolyBit များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PolyBitPOLY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0473PolyBitPOLY သို့ ယူရိုEUR€0.0402PolyBitPOLY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0363PolyBitPOLY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0432PolyBitPOLY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.429PolyBitPOLY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.299PolyBitPOLY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.06PolyBitPOLY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.177PolyBitPOLY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0634PolyBitPOLY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0662PolyBitPOLY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.06PolyBitPOLY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.367PolyBitPOLY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.258PolyBitPOLY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.55PolyBitPOLY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.7.99PolyBitPOLY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.065PolyBitPOLY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0718PolyBitPOLY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.48PolyBitPOLY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.33PolyBitPOLY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥5.01PolyBitPOLY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩56.3PolyBitPOLY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦18.32PolyBitPOLY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽3.49PolyBitPOLY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.31
PolyBitPOLY သို့ BitcoinBTC0.000004 PolyBitPOLY သို့ EthereumETH0.000121 PolyBitPOLY သို့ LitecoinLTC0.000825 PolyBitPOLY သို့ DigitalCashDASH0.000483 PolyBitPOLY သို့ MoneroXMR0.000508 PolyBitPOLY သို့ NxtNXT3.45 PolyBitPOLY သို့ Ethereum ClassicETC0.00685 PolyBitPOLY သို့ DogecoinDOGE13.93 PolyBitPOLY သို့ ZCashZEC0.000512 PolyBitPOLY သို့ BitsharesBTS1.8 PolyBitPOLY သို့ DigiByteDGB1.62 PolyBitPOLY သို့ RippleXRP0.164 PolyBitPOLY သို့ BitcoinDarkBTCD0.00161 PolyBitPOLY သို့ PeerCoinPPC0.158 PolyBitPOLY သို့ CraigsCoinCRAIG21.26 PolyBitPOLY သို့ BitstakeXBS1.99 PolyBitPOLY သို့ PayCoinXPY0.814 PolyBitPOLY သို့ ProsperCoinPRC5.85 PolyBitPOLY သို့ YbCoinYBC0.00003 PolyBitPOLY သို့ DarkKushDANK14.96 PolyBitPOLY သို့ GiveCoinGIVE101.01 PolyBitPOLY သို့ KoboCoinKOBO10.54 PolyBitPOLY သို့ DarkTokenDT0.0436 PolyBitPOLY သို့ CETUS CoinCETI134.66
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Mon, 10 Aug 2020 00:20:03 +0000.